Inona no jerena ao amin'ny tanànan'ny Benares any India | Vaovao momba ny dia
Benares dia tanàna indianina any amoron'ny Ganges ao amin'ny fanjakan'i Uttar Pradesh. Tanàna mifandray tsara amin'ny tanàna toa an'i Calcutta, Agra na Delhi izy ary misy seranam-piaramanidina iraisampirenena. Fa ambonin'izany rehetra izany dia i Benares no raisina ho tanàna masina indrindra amin'ireo tanàna fito fito. Toerana ivavahana lehibe izy io ary toerana mahaliana ny mpizahatany izay te hianatra avy amin'ny fomban-drazana ihany koa.
Andao hojerentsika izay mahaliana ho an'ny mpandeha ny tanànan'i Benares. Ity tanàna izay nitombo noho ny indostria ity dia ivon-kolontsaina manan-danja tokoa nandritra ny an'arivony taona maro, mba ahitantsika fifangaroan'ny fampandrosoana sy ny fomba amam-panao.
1 Tantaran'i Benares
2 Ny reniranon'i Ganges
3 Ny matoatoa
4 Lanonana ara-pivavahana Aarti
5 Oniversite Hindoa any Benares
6 Manaova yoga any Varanasi
Toa efa nisy mponina tao amin'ity faritra ity teo amoron'ny Ganges tamin'ny taonjato faha-XNUMX tal. Tany amin'ity toerana ity tany India dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia tonga nitady ny foibe ara-kolontsaina sy ara-pivavahana nisy azy ny olona. Ny finoana dia nilaza fa ny iray amin'ireo loha efatra an'ny andriamanitra Brahma dia nipetraka teto amin'ity toerana ity ary noho izany dia mbola toerana fivahinianana lehibe sy ivon-toerana fivavahana any India izy io. Ankoatr'izay, hoy ny Hindoisma, izay rehetra maty ao an-tanànan'i Benares dia hafahana amin'ny tsingerin'ny fanambadiana teraka tao amin'ny vatana vaovao indray. Ity toerana ity amin'izao fotoana izao dia manintona mpivahiny Hindou maro izay milentika ao anaty rano amin'ny Reniranon'i Ganges no mihevitra ny rano masina ary manao fombafomba fandevenana isan-karazany. Izany no antony nahatonga azy io koa ho lasa toerana fizahan-tany hianarana bebe kokoa momba ny kolotsaina Indiana.
Ny renirano Mandeha kilometatra an'arivony maro miala ny Himalaya ny andian-jiolahy ary ny enina amin'izy ireo dia mamakivaky ny tanànan'i Benares, toerana fivahinianana masina izay niheverana ity renirano masina ity ho zava-dehibe indrindra amin'ny fombafomba sy amin'ny fiainana andavanandro. Fantatsika fa ny iray amin'ireo sary hita indrindra any India dia ny an'ny dingana mahazatra izay mitarika mankany amin'ny Ganges, toerana iray izay fandroana na fanaovana hetsika samihafa ny mponina ao an-tanàna. Amin'ny maha-tanàna manan-danja azy ara-pivavahana, fantatray fa hahita fombafomba mahaliana eto isika. Saingy ny Ganges dia renirano iray izay na dia masina aza dia manana loto avo amin'ny rano izay toa maloto foana. Azo atao ny mitaingina sambo eny amoron'ny renirano fa tsy tokony hisotro an'io rano io ianao na hilomano ao anaty rano.
Amin'ireo rano ireo dia tsy hoe mandro fotsiny izy ireo, fa koa manasa lamba izy ireo matetika ary mametraka fatin'olona na biby mihitsy aza. Na izany aza, mino ny Hindou fa masina ireo rano ireo ary izany no antony tsara handro ao aminy, mba ahitantsika olona maro manao izany.
Iray amin'ireo toerana ijanonantsika indrindra ny matoatoa malaza. Ireo no faritra amin'ny tohatra mampifandray ny tanàna amin'ny reniranon'i Ganges. Ireto fijoroana ireto dia tena fahita any Benares, satria manodidina ny sivifolo eo amoron'ny renirano. Ireo ghats ireo dia be dia be fa ny sasany malaza kokoa noho ny sasany. fantatro fahazoan-dàlana hitsidika an'i Dasashwamedh ghat, iray amin'ny toerana malaza indrindra ary toerana ahitanao matetika ny olona mandro sy manao ny fombafombany. Ankoatr'izay, akaikin'ny Tempolin'i Vishwanath izy io, izay tsy azon'ny Hindou idirana ihany fa hita avy any ivelany. Ny matoatoa malaza hafa dia i Manikarnika na i Scindia.
Lanonana ara-pivavahana Aarti
Raha misy zavatra tsy azontsika adino any Benares dia manatrika lanonana ara-pivavahana any amin'ny Reniranon'i Ganges izy. Ao amin'ny Dasashwamedh ghat no anaovana ity lanonana ity amin'ny tolakandro izay misy afo, dihy nentim-paharazana sy mozika mifangaro ao anaty tontolo tsy manam-paharoa. Ity lanonana ity dia mety jereo avy amin'ny renirano amin'ny sambo na avy amin'ny ghat mihitsyKoa satria afaka manatrika ny rehetra ny olona, ​​izany no antony itiavan'ny mpizahatany mankany Varanasi azy io. Ho fanampin'izay, mandritra ny lanonana dia azonao atao ny manararaotra mividy zavatra amin'ireo mpivarotra amoron-dàlana marobe ao amin'ilay faritra.
Oniversite Hindoa any Benares
Ity tanàna ity manana oniversite koa io. Niorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy io ary manana tranobe maromaro izay manana rafitra Gothic Indiana, miaraka am-panahy mitaona fanahy. Izy ireo dia tranobe taloha misy fanatrehana mahafinaritra izay tian'ny mpizahatany ho an'ny maha-izy azy.
Manaova yoga any Varanasi
Fantatsika fa ny Ny fitsipi-pifehezana yoga dia malaza be any India ary misy olona maro izay mandeha any hitady fandriam-pahalemana ara-panahy sy mba hahatanteraka ity kanto ity. Ao Benares dia hahita toerana hanaovana yoga isika, na dia eo am-baravarana aza dia mahazatra ihany koa ny mahita olona misaintsaina. Misy ivon-toerana yoga maromaro izay azo tsidihina mba hankafizanao fivoriana iray amin'ny toerana misy lanjany lehibe ara-panahy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Varanasi, India